Ciidamada Dowladda oo Howlgallo ka sameeyay Magaalada Baydhabo. - Latest News Updates
Ciidamada Dowladda oo Howlgallo ka sameeyay Magaalada Baydhabo.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Booliska Maamulka Koonfur Galbed ayaa waxaa ay xalay howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid ah Xaafadaha Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Howlgalka ayaa saraakiisha hoggaamineysa waxa ay sheegeen in uu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo,isla markaana inta badan laga sameeyey xaafadaha Magalada Baydhabo,waxaana holwgalka lagu qabqabtay dad u badan dhalinyaro.
Ciidamada dowladda iyo kuwa Booliska Koonfur Galbeed ayaa intii ay howlgalka wadeen waxaa mararka qaar ay baaritaano ku sameynayeen guryaha ku yaalla Baydhabo,waxaana dad Baydhabo ku sugan ay sheegeen in intii ay xalay ciidamadu howlgalka wadeen uu saaameyn ku yeeshay Goobaha Ganacsiga qaar.
Ciidamada ayaa dadka ay soo qabteen,waxaa ay ku sameeyeen baaritaano,waxaana qaarkood la geeyey Saldhiga weyn ee Magalada Baydhabo halka dadka qaarkood ay Ciidamada howlgalka sameeyey ay siidaayeen.
Saraakiisha Ciidamada howlgalka waday iyo Maamulka Magalada Baydhabo intaba weli wax faah faahin ah kama bixin howlgalkaas,hayeeshee waxaa mararka qaar ka dhaca falal la xiriira amnidarro, waxana dhowr jeer bam gacmeedyo lagu weeraray Guryo ay degan yihiin Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Wararka saakay laga helayo Magalada Baydhabo ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid sideedii hore kusoo laabatay,isla markaana isku-socodka dadka iyo Ganacsiga ay yihiin kuwo caadi u socda.